Xanaano mamnuucday kala saarka wiilasha iyo gabdhaha | Somaliska
Xanaano mamnuucday kala saarka wiilasha iyo gabdhaha
Xanaano ku taala magaalada Stockholm ayaa mamnuucday in caruurta loo kala saaro “isaga” iyo “iyada” taasoo ay sheegeen in ay ku doonayaan in ay ku muujiyaan sinaanta wiilasha iyo gabdhaha. Iskuulkaan oo la furay sanadkii la soo dhaafay ayaa sheegay in bulshadu ay siiso wiilasho heer ka sareeya gabdhaha taasoo cadaalad daro ah.
Erayada Swedishka ah ee “Han iyo Hon” ayay shaqaalaha iskuulkaan ku badaleen
“hen” oo ay ugu yeeraan dhamaan dadka raga iyo dumarka.
Xanaanadaan ayaa xitaa waxay buugaagta ay caruurta siiyaan ku xayeysiinayaan dadka qaniisiinta ah , iyadoo ay sheegeen in ay doonayaan in caruurtu ay noqdaan waxa ay jecelyihiin halkiii ay ka noqon lahaayeen wiil ama gabadh.
Tusaale ahaan marka caruurtu ay ciyaarayaan oo ay guri dhisayaan ayaa waxaa ka mid hawlaha xanaanadaan in ay ilmaha ka dhaadhiciyaan in ay yeelan karaan 2 aabe ama labo hooyo taasoo lagu muujinayo in ay caadi tahay in dadka qaniisiinta ah ay waalidiin noqon karaan.
Qubaro ku taqasustay cilmi nafsiga ayaa sheegay in fikrada iskuulkaan aysan wanaagsaneyn oo wiilasha iyo gabdhaha aysan isku wax jecleyn ama isku si u dhaqmin. Si kastaba ha ahaatee, arintaan ayaa la dhihi karaa waa miraha ay dhalisay dimoqraadiyada Sweden ee ah “waxaad doonto samee”.
Maamulka iskuulka ayaa sheegay in 1 waalid ay ilmahooda kala bexeen iskuulka, halka ay waalidiin badan fayl dheer ugu jiraan in ay ilmahooda gashadaan xanaanadaan.
Hogaamiyaha xisbiga cunsuriga oo aan la marti qaadin
INAA.LILAAH.WAINAA ILEYHU.RAAJACUUN INTAS KABADAN MAWDUCAN OO FIKIR AH UMAHAYO WAABA NAXSANAHAY?
June 28, 2011 at 22:00
Waxay ka mid tahay Dabinada lala Doonaa , Da’yarteena!!
Haddaba waxaa waa loo dhigaa oo in badan ayaan ka oga , maxaa yeelay dhalinyarnimaan wadankaan ku imid , xaalada iskuuladana waan garanaa .
Hadda ruuxeeda qorshaha caynkaana ma yara balse , waa qaar siroon iyo qaar banaan yaala.
Iskuulkaan arintiisa waa banaan yaal halka ilmaheenana si sir aha ama maldahan oo waalidka iyo ilmaha xitaao . fahmayn lagu bar
June 28, 2011 at 22:05
ASC FIKIRKYAGA ANIGA QUBURADAS AYAN LAQABA ISKU WAX MAJECLANKARAN QANIISNIMADANA ASAGAY UTAL QOFKA WUXUU DONO LAKIN ILMO HADER INLAGU ABABIYO WAX FICAN UMA ARKO WAXAS FIKRAD AY QABAN AYAN U ARKA OO AY DONAYAN INAY KU ABABSHAN ILMAHA MARKA UMA ARKO XORIYADA SALIIMKA EE UU YELAN ARO QOF BANI ADAM AH WLAIBANA ISAGU YAR HADER OO AN NAFTISA GARIN HER UU KAGARO WUXUU NOQN LAHA MARKA MATAGEERSANI QUBURADAAS CILMI BARISTA SAMEYAYYA AYAN LAQABAA FIKRADAAS MAHADSANIDIIN
June 28, 2011 at 23:04
Alla Doow aysan Daawo Jirin , Maxaa Laga Daydayay !!
Walaalahayga Soomaaliyeed , bal aan su’aal idin waydiiyo .
Oo Ilmaha aad 8 Subaxnimo Islaamo Gaalo ah u diraysaan ee 4 Galabnimo ka keensanaysaan , ma waxaa isleedihiin Alle iyo Rasuul ayay idiin Baraayaan???
Wallee in aysan idiin barayn ee , iskadaa wax kalee sidii marka uu 18 gaadho kaaga Guuri lahaa ayay baraayaan !!
walaahi wa dhibato waalidiinta somaliyed haka ilaalsadaan caruurtooda waa dhibaato aadu weeyn ilahey ayaan uga magan galnay waxa ay wadaan
June 28, 2011 at 23:22
Ar mesha ya igeya ani nag ***[AFXUMO WAA KA MAMNUUC SOMALISKA.COM]***
June 28, 2011 at 23:24
Bis milahi kan ma xishonaye war naga xisho wa ceb waxas jamac yap yap
mr indha-yare says:
June 29, 2011 at 07:05
war ninkan jimcaale la baxay muxuu ahaa oo odayga magaciisa wata oo afka xun.. War xishood ninyohow… Oo alle ka cabso. Tan kale mesha gaalada waxay rabto ayay samaynaysaa ee carruurteenna aan aad uga taxaddarno… Alloow annaga iyo carruurtaba na xifdi.
subxaana llah, ilaahoow noo xifdi caruurta sharta gaaladana naga xjibaan dalkeenana nabad nooga dhig, midka jimcaale la baxoow doqon baad tahay xishood laawe ah, adigoo kale naagaha waad ka cabsataa sababtoo meeshaad joogto hablo soomaaliyeed oo qurux badan weyjoogaan mid kuu qalanto ka raadso ayadaa baahidaada ku filane laakiin afxumo dadka hala soo dhex istaagin intaan hanan weysay dumarkiii.
Walaal Jimcaale Alle ka baq , haddii magacaaga Jimcaale ahayna ha ceebeeyn magaca Maamulaha.
Haddii aad sisaa rabtayna waad siranta , maxaa yeelay Jimcaale sawir Somaliska ah ayaa u saaran marka Boqol eber ayaa baxday duqa salaama.
Asc akhyaarta sharafta leh maxaa jimcaalle loo heystaa jimcaale waxoo ka hadlay waxey gaalada sameeyaan maxaad jimcaale usheegaa sheekadaan maaku heysatiin inlee xaqiiqdoo ka hadlay illahey ubadka hanoo waardiyeeyo habrahaan dagiska idinkuba waad argataan waxey wadaan ee jimcaale kaleexda waad aragtay wadankaan waa faree qof walbo
alla nacas iska hadla badanaa
Saciid Cali .
Deg Dega daa , Jimcaalaha la haysto maahan Jimcaalaha Shabakada waa mid kale oo , hadal aan wanaagsanayn soo qoray .
Qoraalka dhexda ayaa uga soo dhacday wada aqri Ustaad Siciid , kedib uraa kuu baxaa tilmaamaa Jimcaalaha lahaystaa waa ayo!!
Dib u aqri Ra’yiga dadka laga soo Bilaabo Jimcaale qofka wata .
Ka raali noqda qofka la baxay “Jimcale” ee hadalka af xumada ah ku soo qoray bogga. Waan ka mamnuucnay in uu akhristo Somaliska.com –
Sida uu sheegay abu Xudeyfa aniga waxaa ii saaran calaamada “S” oo muujineysa calaamada Somaliska.com
Saciid Cabdi walaal adiguna waa mahadsantahay mowduuca ma ahan waxa ay dadka la hadlaan ee waa nin hadalo xun ku soo qoray qeybta fikradaha oo magaca Jimcale isticmaalay. Mahadsanid
Asc Aniga waxay ila tahay walid walba siduu ilmihiisa kadhigo ayuu noqona waayo waxii ilmaha laku so bar baarsho maba ilawan ilaa u allah kabad badsho mooyee.
Bal kawarama hooyo walba o ilmo dhasho haday canugeeda haysato ilaa u ka gaaraayo 6 år maxa kujaban. Waxaan abayasha somaliyed o shaqaysta kula talin lahaa iyo hoyoyinka mar walba dhala inay ilmahooda gurika ku haystan ilaa 6 år
Aniga waxa aqana hoyoyin badan o mar walba dhala oo ilmahooda gurika ku haysta wana mida lo ka bixi karo, waayo canuga intuu kagaarayo 6 år waxa lasii bari kara qur,aanka markaasna wuu si caqliyaysana o wu fahma wax walba.
Hadii aysan noqon in ilmaha gurika laku haysto waxaa dhihi laha walidinta inay ilmahooda geya dugsiyada qur,anka o ay baran diinta islamka iyo waxii wanaagsan kana reban waxii xun.
Allah ilmaha muslimadka ah hadhowro.